laacibfm.com » Muxuu Ahaa Rikoodhka Qariibka Ah Ee Marcelo Uu Axaddii Kula Dabbaal-degay Madaxweyne Florentino Perez?
Marcelo ayaa qolka lebbiska kula dabbaal-degay Madaxweynaha Real Madrid ee Florentino Perez kaddib guushii 1-0 ahayd ee ay Axaddii ka gaadheen Athletic Bilbao.
Difaaca reer Brazil ayaa sameeyey bandhig cajiib ah oo uu kooxdiisa kaga caawiyey guusha, isaga oo sabab u ahaa rikoodhaha loo dhigay Los Blancos.
Laacibkan ruug-caddaaga ah ayaa dib ula wareegay booskiisa difaaca bidix oo uu ka saaray Ferland Mendy oo isaguna qaybo muhiim ah kasoo ciyaaray bandhigga kooxda ee xili ciyaareedkan, waxaana bandhigga fiican ee Marcelo ay lasoo bilowdeen intii ciyaaraha dib loogu soo laabtay, iyadoo uu ku furtay gool uu ka dhaliyey Eibar kulankii ugu horreeyey.
Labadii ciyaarood ee Real Sociedad iyo Espanyol ayuu iyagana soo bandhigay ciyaar sarraysa, gaar ahaan dhinaca weerarka oo uu qayb weyn ka qaatay, ka hor intii aan lasoo gaadhin Axaddii oo uu lagu galay rikoodhaha guusha ku hoggaamiyey.
Horraantii xili ciyaareedkan, waxa Marcelo uu ku jiray dhibaatooyin badan, waxaana ku habsaday dhaawacyo is xigay oo muddo 100 maalmood ah uu u jiifay, waxaana muddadaas kooxda sii caawiyey Mendy oo booska kusii jiray, laakiin waxay u muuqataa in jidh ahaan uu hadda taam yahay oo uu dib ula wareegay booskiisa.
Rikoodhka uu Madaxweynaha kula dabbaal-degay
Guusha Athletic Bilbao, waxay ahayd libintii 350aad ee uu Marcelo la gaadho Real Madrid, waxaana funaanad lagu daabacay tirada guulahaas qolka lebbiska ku guddoonsiiyey madaxweyne Florentino Perez.
350ka guulood ee Marcelo, waxay kala yihiin 248 horyaalka LaLiga ah, 65 Champions League ah, 22 Copa del Rey ah, Siddeed Club World Cup, saddex UEFA Super Cup iyo afar Spuercopa de Espana ah.
Guud ahaan waxa uu Marcelo u ciyaaray Real Madrid 509 ciyaarood oo dhamaan tartamada ah, waxaanu kula guuleystay 22 koob oo ay isku mid ka yihiin Sergio Ramos, waxaanay labadooduba hal koob ka hooseeyaan Paco Gento oo ah ciyaartoyga taariikhda Real Madrid ugu koobabka badan.